विश्वकै दोस्रो अग्लो बञ्जी जम्प पर्वतमा - Entertainment Khabar
विश्वकै दोस्रो अग्लो बञ्जी जम्प पर्वतमा
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २८, २०७६ समय: १२:५२:३८
पर्वतको कुस्मा र बागलुङ बिचमा रहेको कालिगण्डकीमा निर्माण भएको ‘द क्लिफ बञ्जी’ विश्वकै दोस्रो आग्लो बन्जी जम्प हो । यसको विशेषता भनेको हिमाल हेर्दै बन्जी गर्न पाइने हो । नेपालका अग्ला र लामा झोलुङ्गे भएको जिल्ला भनेर चिनिने पर्वत र बागलुङको बीचमा बग्ने कालीगण्डकी नदीमाथि बनेको बञ्जी जम्पको परिक्षण भएको छ ।
बञ्जी जम्प सहासी र डर लाग्दो खेल हो । यो जम्प गर्नलाई आट र हिम्मतको जरुरत पर्दछ । यो खेल खेल्न सबैले चहाना राख्ने गर्छन् तर यो जम्प गर्न निकै आँट चाहिन्छ । यो खेल खेल्नका लागि पर्वतमा स्वादेशी तथा विदेशी पर्यटनहरूको चाप लाग्ने गर्छ ।
द क्लिफ नेपाल प्रा‍. लि. ले २० करोडको लागतमा निर्माण गरेको छ । उक्त बञ्जीको श्रीपञ्चमीको शुभसाइत पारेर सफल परिक्षण गरिएको हो । विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुलमा निर्माण भएको बञ्जी प्रभु बैंकको समेत ऋण सहयोग रहेको छ ।
एशियाकै नमुना पुलमा गनिएको कालिगण्डकी नदिको खोँचमा बनेको उक्त झोलुङ्गे पुलको लम्बाई ५२५ मिटर रहेको छ भने खोलादेखि पुलको उचाई २२८ मिटर ९७४८ फुट रहेको छ । यो बञ्जी जम्प पोखरादेखि ५५ कि।मी। दुरीमा पर्छ ।
कुस्मा बागलुङमा रहेको ‘द क्लिफ बञ्जी जम्प’ भने झोलुङ्गे पुलमा निर्माण भएको विश्वकै दोस्रो बञ्जी भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ ।
यस बञ्जीमा हुने ६ सेकेण्डको ‘फ्रि फलु’ले आकाशमा उडेको आभास दिलाउँछ । दायाँ र बायाँ हरिया डाडा, तल कालिगण्डकी अनि सामुन्ने हिमाल हेर्दै जम्प गर्दा छुट्टै अनुभुति दिलाउँछ । बञ्जी जम्पका लागि आउने पर्यटकहरुलाई मध्यनजर गर्दै बागलुङको बलेवामा २५ रोपनी क्षेत्रफलमा ‘लभ कुस्मा’ रिसोर्ट सञ्चालनका लागि निर्माण कार्य भइरहेको छन् । रिर्सोटमा अधिकांश कोठाहरु टेन्टबाट बनाइँदैछ । २१ वटा सफारी टेन्टमा ७० जनाको क्षमता रहने निर्माण कम्पनीले बताएका छन् ।
मलमासको समयमा दम्पतीहरु किन छुटिएर बस्नु पर्छ ? मलमासमा यौन किन बन्देज छ ? (भिडियो)
आउदो असोज २ गतेदेखि मलमास सुरु हुँदै छ । एक महिनासम्मको समयलाई अधिक मास भनिन्छ । अधिकमास अर्थात मलमासको बेला विवाहित जोड...
काठमाडाैँ । शारीरिक सुन्दरताले मानिसको व्यक्तित्वमा सकारात्मक प्रभाव पारिहेको हुन्छ । सुन्दर देखिनु भनेको अरूलाई सजिलै आ...
सुहागरातमा पान खाएपछि बिछोड
विवाह जस्तो पवित्र बन्धनमा बाधिएपछि केटा र केटी दुवैले एक अर्काको इच्छा र भावनामा ध्यान राख्नु जरुरी हुन्छ । जहाँ केटीले...
काठमाडौं– स्वास्थ रहनका लागि शरीरमा हेमोग्लोबिनको स्तर ठीक हुनु अति आवश्यक छ । हेमोग्लोबिनको कमी हुँदा हामीले विभिन्न स्...
‘लै लै’का गीतकार गणेश शाहीको शब्द संगीत र स्वरमा ‘स्वर्गको चित्र’ सार्वजनिक (भिडियो )
प्रसाद फिल्मको लोकप्रिय गीत ‘लै लै’का गीतकार गणेश शाहीले आफ्नै शब्द र संगीत र स्वर रहेको गीत ‘स्वर्गको...
काठमाडौं – हामिले सुतेको समयमा सपना देख्ने गर्छौं । सपना कहिले राम्रो देखिन्छ त कहिले नराम्रो । हामिले सुतेपछि देख...